Mananjary : olona 10 tratra nangalatra ny taribin’ny Telma | NewsMada
Mananjary : olona 10 tratra nangalatra ny taribin’ny Telma
Saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahadimy eny Mahamasina, ny talata teo ireo olona miisa 10 tompon’antoka tamin’ny halatra taribin’ny orinasa Telma teny amin’ny fokontany Mananjary. Milanja 50 kg ny tariby tratra tany amin’izy ireo…
Teo am-pangalana ny taribin’ny orinasa Telma no tratran’ny polisy ireto jiolahy ireto. Araka ny fanazavan’ny polisy, nandritra ny fisafoana nataon’izy ireo no nahasamborana azy ireo ny talata tamin’ny 2 ora maraina. Tratra niaraka tamin’izy ireo ny tariby milanja 50 kg. Tonga nametraka fitoriana teny amin’ny biraon’ny polisy, eny Mahamasina, ny orinasa Telma manoloana ity halatra tariby ity. Nosamborina avy hatrany ireo olona voarohirohy ireo ka tamin’izany no nanondroan’izy ireo ny olona mpandray ny entana halatra.
Voasambotra teny Ankadimbahoaka ny lehilahy roa voalaza fa mpividy ireo taribe halatra ireo. Samy niaiky rahateo izy ireo fa ireo olona 10 ireo no mpangalatra ary izy roa lahy no mpandray ny entana halatra rehetra. Nilaza ry zalahy fa efa ela no nanaovany ity fangadiana taribin’ny orinasa Telma ity, saingy izao kosa vao tratra. Ireo tariby milevina any ambanin’ny tany ity misy mangady ity. Mbola tratra tany amin’izy ireo rahateo ny angady fangadiana ireo tariby.